Umvumbo umqhubi Intlawulo uyala Bitcoin - Blockchain News
Umvumbo umqhubi Intlawulo uyala Bitcoin
Odolo Intlawulo umvumbo Buphele Inkxaso Bitcoin
Le umvumbo operator Intlawulo yabhengeza ukuba iza kumshiya bitcoin phakathi kwiinyanga ezintathu ezizayo kwaye ulahle ngokupheleleyo ngalo April 23. Oku ingxelo ngumphathi imveliso Tom Carlo kule nkampani blog esemthethweni.
Umvumbo waqala ukuxhasa iintengiselwano bitcoin ku 2015, ikukubonelela ngendlela yokufikelela intlawulo bitcoins ukuba ngaphezu 60 amazwe. kunjalo, ixesha elide processing transaction, ukwanda kwinani imicimbi abangaphumelelanga kunye neentlawulo ezikhulayo wenza bitcoin kancane phakathi kubasebenzisi ngombala: “Bitcoin ulahlekelwa zalena abasebenzisi bethu. Nokubambisana iinkampani zorhwebo baqalisa ukufumana ingeniso encinane bitcoin, “- Carlo uthi.
Tom Carlo waphawula ukuba ngombala “optimistically ukhangela crypto-kwizimali ngokubanzi” yaye, mhlawumbe, kwixesha elizayo iza kuxhasa altcoins ngaphezulu, kubandakanya ogcwele, ukuba ingqekembe uba zithandwa kakhulu. Ukwengeza, ubona umbono kwiiprojekthi ezifana Lightning, OmiseGO, Ethereum, Bitcoin Cash and Litecoin.
Abasebenzisi abaninzi network inkxaso isisombululo inkonzo:
Bitcoin waba mkhulu, mbuso nokuba kodwa kukho ngokukhawuleza, #cryptocurrencies Akubizi kakhulu kwaye igagasi uphume khona ngoku. Lifikile ixesha lokuba enze indlela yokuba kids ezintsha kwi ibloko # StellarLumens #Ethereum
Nangona abanye ingqalelo oku isenzo nabanorhatyazo elifutshane ngosuku olwandulela Umbane kunye nezinye izisombululo scalability ukuba inethiwekhi Bitcoin, abasebenzisi abaninzi basakholelwa ukuba kukho cryptocurrencies ezininzi ungakhuphisana bitcoin.
Akukho ndlela eya kunika ezi ndaba umvumbo njengeendaba ezilungileyo. Thina sukuba ekuxelela zonke abarhwebi adopter ekuqaleni ukuba wenza i "Indlela ephosakeleyo," kwaye ngoku ukuba retool ukongeza network umbane. Kodwa awunguye. Andiwaboni ukuya Bitcoin imali (okanye ezinye) mhlawumbi. ukuba ke eshiya
Musa dabba le pipi njenge "nto ke ithetha ukuba iintlawulo yinto enye", oko kuthetha ukuba kuya kufuneka alinde de ecosystem ilungele kwakhona uze te-beshumayela wonke okwesibini xa iintlawulo iphantsi kwakhona. Usebenza kuzo zonke iinkozo, ethereum ayikho "ukulungele" nokuba.
Umda block kufuneka owavuswayo kwiminyaka emibini edlulileyo, phambi kokuba nayiphi na laba iingxaki ngokoqobo, kwaye singathanda Ndithenge ixesha. Kodwa abanye abantu FUD'ed ngeengxaki yentelekelelo elizayo ukuthengisa isisombululo elizayo ukuba Ndandingekakulungeli waza wadala imiba ezinkulu benene langoku. /rant
In ekuqaleni kukaDisemba, i bitcoin-iintlawulo walelwe yi inkonzo umdlalo Steam. Kwakhona le nguqulelo Ethereum ibhloko ukuya Ndisezinkwenkwezini wayesele babhengeza CEO of Kik isithunywa Ted Livingston. Ngokutsho kwakhe, Ethereum “ezama ukuba yonke into kubo bonke”, kakhulu ngumthwalo yaye akusayi ezanelisa iimfuno yesicelo nge 10,000 abasebenzisi.
Austria uceba ukulawula Bitcoin ezifana negolide nezakhi
ngemali Austria kaThixo mi ...
Post Previous:Robotrading okanye Trading manual
Post Next:Blockchain News 25 EyoMqungu 2018